The general knowledge for you& friensGeneral Knowledge - Myanmar BOC
အထွေထွေ ဗဟုသုတများ လေ့လာကြမယ်။
Welcome to Best Free Online Learning Courses in Myanmar
General Knowledge တွင် Marketing, video Editing, Photoshop, Microsoft Exel, AutoCAD 2010, Duwun, Facebook အကြာင်းသိသင့်စရာများ၊ Peaceful Land ရဲ့ Videos များ၊ ဆရာမာသင်ရဲ့ Vidios များ၊ ဆရာ Ko LATT ရဲ့ videoများ နှင့် SEO အကြောင်း ပြီးတော့ အခြား IT ဗပာုသုတများစွာကိုစုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
The General knowledgeအတွက် သင်ခန်းစာများကို ထပ်ထည့်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ပါဗျာ
Teacher MMBOC Admin
တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာမျှဝေမှု (Personal Development)
တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာမျှဝေမှု (Personal Development) ကို ဆရာ ပြည်ခိုင်မှ မျှဝေထားသော Videoများကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
MicroSoft Word လက်တွေ့သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Enrollပြုလုပ်ပြီးစတင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (Enrollပြလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Previewပြလုပ်ထားသောသင်ခန်းစာများသာလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
Karaoke Video စာတန်းထိုးလုပ်နည်း
Technical Panthaမှ ပြောပြသင်ကြားထားသော Karaoke Video စာတန်းထိုးလုပ်နည်းကို စုစည်းထားပါတယ်။
Guitar tutorial Myanmar
Teacher Htet Yan
Android Phone နဲAPK လုပ်နည်း
May 19, 2020 /3Comments
Apk making with Android Phone.. ဒီသင်ခန်းစာမှ Android Appပြုလုပ်နည်းကို လေ့လာနိုင်အောင်သင်ကြားပြောကြားပေးထားပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးက Computerအသုံးမပြုပဲ မိမိလက်ထဲက Android Phoneလေးဖြင့် ပင် APKများကိုဖန်တီးနိုင်အောင်ပြောကြားပေးထားပါတယ်ဗျ APKတွေဖန်တီးချင်နေတဲ့သင့်အတွက်တန်ဖိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီTraining Videosလေးများကို လေ့လာပြီး အဆင်ပြပါက ကြယ်ငါးပွင့်ပေးကာ Reviewsပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော့်(don’t forget to reviews this lessons) အခက်ခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် see all courses- click here Websiteပြုလုပ်ချင်ပါက ဆက်သွယ်ရန်
Arduino Online Training
November 12, 2019 /2Comments
Arduino Online Training Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Arduino boards are able to read inputs – light onasensor,afinger onabutton, oraTwitter message – and turn it into an output – activatingamotor, turning on an LED, publishing something online. To read detail about…
Microsoft Word သင်ခန်းစာ
October 18, 2019 /3Comments
Microsoft Word Tutorial Myanmar Microsoft Word Tutorial ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် အခမဲ့ လေ့လာနိုင်ရန် MyanmarBOC မှ အကောင်းဆုံး training video များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ What is Microsoft Word – https://www.youtube.com/watch?v=nqM1LUnsa_E Related Course 1. Microsoft Excel 2. PowerPoint